Ubuntu smartphone - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Ubuntu smartphone ပါ တဲ. ဗျာ။ Ubuntu linux desktop တင် မ ဟုပ် ပဲ mobile OS မှာ ပါ ဝင် ပါ တော့ မယ် ဆို ပါ တော့။
start ~6:00 (for impatience )
လော လော ဆယ် တော့ Nexus ဖုန်း မှာ ပဲ demo ပြ ထား တာ ပါ။ သူ့ ကို ပိုင် hardware တော့ မ ရှိ ရှာ သေး ပါ ဘူး။ UI navigation, multi-tasking UI တွေ က တော့ webos, Meego, windows 8 metro တို့ နဲ. ဆင် တာ တွေ့ ရ မှာ ပါ။
html web app နဲ. native app တွေ ဆို ရှိ မယ် ဆို ပါ တယ်။
သီ ချင်း တွေ movie, digital contents တွေ အ တွက် amazon နဲ. ပေါင်း ထား တာ တော့ တွေ့ ရ တယ်။ ဒါ ပေ မဲ. US လောက် မှာ ပဲအ သုံး ဝင် မှာ လား မ သိ ပါ ဘူး။ Ubuntu desktop သ မား တွေ က တော့ amazon integration ကို သိ ပီး သား /hate ဖြစ် မှာ ပါ။
နောက် သူ ရောင်း တာ က တော့ monitor နဲ. ချိတ် လိုက် ရင် desktop လို သုံး လို. ရ တယ် ဆို တယ်။ (Actually nothing new either) windows 8 pro tablet, Android tablet(asus transformer, motorola webtop) ...
cloud service (photo auto sync to other devices like icloud) တွေ လဲ ပါ မယ် ဆို တယ်။
ကျ နော်. အ ထင် အ ရ ဆို Android ထက် တော့ ဘာ မှ ပို သာ မဲ. ပုံ မ ရ ဘူး။
ကျ နော် က တော့ Linux Mobile က ထုက် မဲ. tizen OS ကို ပဲ ပို အား သန် တယ်။
ကျ နော် က တော့ Ubuntu fans မ ဟုပ် တော့ ဒီ ထက် ပို ပီး မ သိ တော့ ဘူး။ ကို g00gle တို့ ပဲ။ To be Cont....
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ Bayint Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလင်း1z, ဦးသိဝါနန္ဒ, မောင်သံသရာ, အောင်ဗလ, အောင်လံလေး, g00gle, kyawminkhoung, minthike, tu tu
ပြန်စာ - Ubuntu smartphone
ကျနော် Tizen OS ကိုတစ်ခါတွေ့ဘူးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကျော် ၄ နှစ်လောက်ကဖြစ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကို Bada OS နဲ့လဲရောနေတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ဇဝေဇ၀ါနဲ့ပေါ့။ အဲဒီတုန်းက samsung က Galaxy ဖုန်းတွေတောင် မထုတ်သေးဘူး။ တကယ်ပြောရရင်တော့ Ubuntu ကို Tizen ထက်ပိုကြိုက်တယ်။
Ubuntu ရဲ့ desktop OS မှာကိုယ်နဲ့လဲ သိပ်မစိမ်းသလို Software Centre ကလဲ ရှိထားပြီးသားဆိုတော့ 3rd Party Apps တွေ ရေးမဲ့ developer တွေက Tizen ထက်ပိုများမယ်ထင်ပါတယ်။ မသိသေးတာက ဘယ် account နဲ့ဝင်ပြီး ဘာတွေ sync လုပ်မှာလဲ???? notification bar ပါလာတာကိုလဲ သတိထားမိတယ်။ ပြီးတော့ UI ကဘယ်လောက်ထိ smoothly ဖြစ်သလဲဆိုတာလဲ မခန့်မှန်းနိုင်သေးဘူး။ Samsung ကတော့ နောင်တစ်ချိန်မှာ ကိုယ်ပိုင် mobile OS နဲ့ခရီးနှင်တော့မယ်လို့တော့ တွက်ဆမိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Google က သူ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သွားတဲ့ motorola ဖုန်းတွေကို( လက်ရှိသတင်းထွက်နေတဲ့ motorola X phone) Apple နဲ့ Samsung တို့ဆီကနေ ဈေးကွက်ဝေစုပိုရရှိရန်အတွက် ဒီထက်ပိုမို ပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ သတင်းဖတ်မိတော့ Android ရဲ့ မဟာမိတ်တွေတစ်ဖြစ်ကနေ ရန်သူတွေအဖြစ် ဦးတည်တော့မှာလားရယ်လို့တွေးမိသား။ ကိုဘုရင့်နောင်နဲ့ ကိုမင်းသိုက်တို့ရော ဘယ်လိုထင်လဲ။။။။။ အဲ......ubuntu phone က Android ဖုန်းတွေကိုပါဆွဲထည့်ပြောမိသွားပြီ။ ဆက်ပြောရရင် Ubuntu ရဲ့ desktop version က UI တွေကတော့ ပျင်းရိဖွယ်ကောင်းပေမဲ့ open source ဆိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ theme တွေကို install လုပ်ခွင့်ရပြန်တော့ တော်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ mobile version ရဲ့ UI တွေတော့ဘယ်လိုလာမယ် မသိသေးဘူး။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ကိုလင်း1z အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, Bayint Naung, g00gle, kyawminkhoung, minthike, tu tu
ကျနော် Tizen OS ကိုတစ်ခါတွေ့ဘူးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကျော် ၄ နှစ်လောက်ကဖြစ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကို Bada OS နဲ့လဲရောနေတယ်
tizen ဆို တဲ. name က 2011 လောက် မှ စ ရှိ တယ် ထင် တယ် နော်။
အ ရင် Linux Mobile က OS ကို တော့ meego (Nokia N9) လို. ခေါ် တယ်။
tizen က တော့ Linux Mobile, samsung, intel တွေ ပါ မယ် ဆို တော့ ပို အင်အား တောင့် မယ် ထင် တယ်။
သိပ်မစိမ်းသလို Software Centre ကလဲ ရှိထားပြီးသားဆိုတော့
Software Center က app(Most) တွေ က Ubuntu exclusive မ ဟုတ် ပါ ဘူး။ ကို လင်း 1z ရေ။ Ubuntu ဆို တာ ရှင်း ရှင်း ပြော ရ ရင် Debian (Linux distro) ပေါ် အ ခြေ ခံ ထား တာ ဆို တော့။
မသိသေးတာက ဘယ် account နဲ့ဝင်ပြီး ဘာတွေ sync လုပ်မှာလဲ???? notification bar ပါလာတာကိုလဲ သတိထားမိတယ်။
webOS မှာ ဆို ရင် တော့ ကို ကြိုက် တဲ. google, hotmail, exchange (contact, calendar) တွေ sync လုပ် လို. ရ နေ တာ ပဲ။ OS specific setting, app တွေ တာ သူ့ account နဲ. သူ ဖြစ် မယ် ထင် တယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ Bayint Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, အောင်ဗလ, မြင့်မိုရ်, bagothar85, g00gle, minthike, tu tu
ကျနော်ပြောပါတယ် ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ ဇဝေဇ၀ါနဲ့ပါဆိုမှ
Bada နဲ့မှားတာလဲ ဖြစ်နိုင်တာဘဲ။ ဒါပေမဲ့ Ubuntu Mobile OS ကတော့ ရှေ့ဆက်ပေါက်နိုင်ဘို့ တော်တော် ရုန်းကန်ရမဲ့အနေအထားမှာတွေ့နေရတယ်။ သူ့ရဲ့ရှေ့က Linux အခြေခံ OS အချို့လဲ တစ်ဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ ကျ ပြီးတော့ နံမည်အသစ်တွေနဲ့ ထပ်ပြန်လည်ထ နဲ့ Mobile World မှာ ရှုပ်ယှက်ကိုခပ်နေတာဘဲ....။။။။
ပြီးတော့ Ubuntu အနေနဲ့ Window OS ကိုလဲ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ရဦးမယ်။ ဒီကြားထဲ မီးလျံမြေခွေးကလဲ တစ်မှောင့်။
သူလဲပါဝင်ချင်တယ်ဆိုပါ့လား။ သိုင်းလောကထက်တောင် စိန်ခေါ်သူတွေများပြီး ရှုပ်ထွေးနေကြသလိုလို....။
Samsung ကတော့ Tizen ဖုန်းကို 2013 ထဲမှာထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့ တရားဝင်ကြေငြာလိုက်ပြီဆိုတော့.......
မောင်သံသရာ, Bayint Naung, g00gle, mmkyioo
mobile os, ubuntu